ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
Posted by cobra on Jan 20, 2011 in News |4comments
လူတိုင်းသိနေတဲ့ အရာကိုပဲ ထုတ်ပြန်ကြေညာနေတယ်။ အဖြေက မရှိဘူး။ ကျားကိုက်ပါတယ်ဆိုမှ အပေါက်ကြီးနဲ့ လားဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ် ကိုမြွေရေ။
အဲသည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေများ လုပ်နိုင်မလဲ?
ဟုတ်တာပြောတာနဲ့ဝိုင်းနှိပ်ကွပ်တော့တာပဲ။ သားသားကြောက်ကြောက်တွေချဉ်းပဲ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က .. တရားစီရင်ရေးအာဏာနဲ့ .. အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ..ဥပဒေပြုရေးအာဏာ..မတူတဲ့ ..မဏ္ဍိုင်ကြီးတွေ.. အပြန်အလှန်..ထိုးဖောက်လို့မရပါဖူးဆိုတာ ..လူထုကိုသင်ကြားအသိပေးပညာပေးလုပ်နေချင်ပုံရတယ်..။
ဒါကို…လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရကလည်း.. ထပ်ခါ ..ပြန်ပြန်ပြတယ်…။
အခုတော့ ဥပဒေပြုရေးအာဏာရှိရတဲ့..လွှတ်တော်က … ပုံပေါ်လာပြန်ပါပြီ..။
တကယ်တော့ .. ဒီမဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ်.. မီဒီယာပါထည့်ရင်.. မဏ္ဍိုင်၎ခု.. ဒါကကဒီမိုကရေစီမှာတင်မဟုတ်.. နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ .. အသက်သွေးကြောပဲမဟုတ်ပါလား..။